Home Ulo oru Europe Boubakary Soumare Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
LB na-enye thegba Akụkọ nke Onye-Egwu Ngwá egwu na aha otutuBouba“. O bu nkpuchi zuru oke banyere Boubakary Soumare Childhood Akụkọ, ndu ya, ndi nne na nna, ihe ndi ezi na ulo, ihe omumu n’oge omumu na ihe ndi ozo a ma ama n’oge ya ka obu nwata. zero mgbe ọ ghọrọ Popular.
Lee, Ndụ Mpempe na Mbilite nke Boubakary Soumare. Ebe E Si Nweta Foto: Lequipe, Twitter na Picuki
Ee, onye ọ bụla maara na onye na-agba bọọlụ si na ezinụlọ Senegalese bụ onye na-ekwe nkwa ịkwalite ọkpọkọ na igbe ka onye na-eme ntụnyere, Paul Pogba ekele n'ikike oru nka ya na ezi ikike ya. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle ụdị Boubakary Soumare's Biography nke na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ugbu a na-enweghị ọzọ ado, ka anyị malite.
Boubakary Soumare Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị A Na-echetaghị banyere Biography - Ndụ mbu na Ezigbo Ezinụlọ
Boubakary Soumare mụrụ na 7th ụbọchị nke February 1999 nye ndị mụrụ ya na Noisy-le-Sec, France. N'okpuru bụ foto nke Noisy-le-Sec, commune dị na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke Paris. Nke a bụ commune (Noisy-le-Sec) ebe ezinụlọ Boubakary Soumare biri tupu amụọ ya.
Nke a bụ Noisy-le-Sec ebe Boubakary Soumare Family sitere. Ebe E Si Nweta: Wikipedia
N'ikpe ikpe site na n ’anya ya dị n’elu, ị nwere ike ịtụ aro nne na nna Boubakary Soumare BỤGHỊ ndị obodo ọcha dị ọcha nke France. Eziokwu bụ, ha sitere na ezinụlọ ha site na Senegal ma yikarịrị ka ọ bụ ndị na-akwaga mba ọzọ kpebiri ịhapụ obodo ha gaa biri na France iji nweta ohere dị mma maka ndị ezinụlọ ha.
Dịka ọtụtụ ndị na-akwaga mba ọzọ, ndị nne na nna Boubakary Soumare na-arụ ọrụ gbasara agbụrụ ezinụlọ. Iji kpata ihe ha ga-eri, ha na-agakarị ihe 8.6 km gaa etiti obodo Paris ebe ọrụ kachasị mma na-acha anụnụ anụnụ na nke na-acha ọcha.
Ndụ Boubakary Soumare: Dabere na FranceFootball, Boubakary Soumare toro dika “Sulkier” (Onye nwere agwa ị notụ ọ )ụ). Ọ bụ nwa kachasị mma nke ga - eme EGO a ga-ahụ ya na akuku nkuku ya (akparamagwa nke omume nwata ya).
N'ime ihe niile, Boubakary Soumare nwere obi ụtọ oge egwuregwu - ya bụ, oge ọ na-agba bọl. Mgbe ọ na-adịghị agba bọl, o yikarịrị ka a ga-ahụ obere nwa nwoke ka ọ na-eri nri ntanetị kachasị amasị ya. Achịcha anụ. N'okpuru bụ foto ndụ nwata na - adịghị ahụkebe nke Boubakary Soumare na - eme ihe ọ maara n'ụzọ kacha mma n'oge ọ bụ nwata.
Boubakary Soumare Oge Ndụ- Foto dị na ya na - eri Meat Pie. Ebe E Si Nweta: Twitter
Boubakary Soumare Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị A Na-echetaghị banyere Biography - Nkụzi na ịrụ ọrụ
N'ịchọpụta na ọ bụghị nwa na-elekọta mmadụ na ọ bụ naanị football mere ka ọ ghara ịdị, Ndị mụrụ Boubakary Soumare kpebiri ikenye nwa ha nwoke ịgbaso akara ya (ịghọ onye na-agba ụkwụ) nke ha ghutara n’oge. Ị maara?… Mmetụta nke owu ọmụma ya mebere maka mbọ ndị ọ na-etinye n’onwe ya iji bọọlụ mee ihe na-adịghị mma.
Himselfmuta onwe ya nke oma n'egwuregwu a mụrụ nzuzu nzuzu ya, nke mere Boubakary Soumare mezuru ihe obula o mere ka anya ya di n’egwuregwu bọọlụ. Dịka onye egwuregwu ụmụaka, ọ nọ n'ihu ndị ọzọ soro ya na-egwuri egwu n'olulu ndị dị n'ógbè ya.
Site na ihe ịga nke ọma nke France na World Cup 2006, ndị nne na nna Boubakary Soumare bụ ndị sitere n'ike mmụọ nsọ kpebiri na ha ga-edobe nwa ha nwoke ihe. Ha kpebiri ịchọ ụlọ ọgbakọ dị nso otú ahụ obere Bouba nwere ike ịnwe ọnwụnwa. Boubakary Soumare onye dị afọ 7 (in afọ 2006) mere njem ruo 23km n'akụkụ nne na nna ya Noisy-le-Sec agbataobi ka Voie des Saules ebe o nwere ule ya na Paris FC.
Ndị nne na nna Boubakary Soumare mere ka o si Noisy-le-Sec gaa Voie des Saules ịga ọnwụnwa. Ebe E Si Nweta: Google
Boubakary Soumare Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị A Na-echetaghị banyere Biography - Ndụ Ndụ Mmalite
N’ime sekọnd mgbe ekwuputara na ya na ụlọ ọgbakọ ahụ nke ọma, ọ theụ ndị ezinụlọ Boubakary Soumare amabeghị oke. Otu iko mba ụwa otu (2006), obere Bouba (aha otutu nwata) debara aha ya na nkuzi nkuzi nke Paris FC (B PSGGH PSG PSG) onye tọrọ ntọala dị mma maka ọrụ ntorobịa ya.
Bouba ngwa ngwa ịbaba n'ụlọ agụmakwụkwọ nke Paris FC. Mgbe ọ na-erule afọ iri na ụma ya, ọ ka nwere ike ime ihe niile - na-aga n'ihu ndị ọzọ mgbe ọ na-egwuri egwu n'egwuregwu Paris FC Déjerine.
Laa azụ n'oge ahụ, Marc Moesta- onye U12 ya na onye nchịkwa U13 ya na Paris FC gbara akaebe n'otu oge na Boubakary Soumare nwere ike ịme ihe dị elu maka obere afọ ya. Ọ bụ ezie na ọ ka nwere omume nke idobe ya ma achọta ya na nkuku ya. N’ezie, Bouba bụ ụdị onye egwuregwu bọọlụ na-eto eto nke nwere ọ playingụ n’egwuregwu bọọlụ ntakịrị n’otu n’otu- ihe ngosi dị ọcha nke a Loner.
Boubakary Soumare Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị A Na-echetaghị banyere Biography - Akpanwu akwukwo akuko
Ọ bụ ezie na kpakpando ahụ na-arị elu nọ na U13 ya, ozi banyere nkà ya na onyinye amalitelarị ịgbasa n'ofe France. N'oge ahụ, ndị nne na nna Boubakary Soumare kpebiri ịnabata echiche nke nwa ha nwoke hapụrụ Paris FC gaa PSG ebe ọ nwere ule na-aga nke ọma. Bouba nọgidere na-enwe ọganihu na PSG, na-esonyere ụdị ndị Matteo Guendouzi onye bụ otu n'ime ndị ntorobịa kachasị mma na PSG n'oge ahụ.
Boubakary Soumare malitere ọkwa ntorobịa ya nke U14s na PSG n'okpuru onye nchịkwa Sébastien Thierry bụ onye hụrụ ya dị ka onye egwu siri ike nke ukwuu - onye agha n'ọhịa. N'agbanyeghị na a toro ya, nwatakịrị na-echegbu onwe ya mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ agụmakwụkwọ. Withgba egwu na Paris Saint-Germain B pụtara na ọ nọ na ndò nke ndị isi otu PSG, mmepe nke dị ka echiche efu na-agafe. N'ụzọ dị nwute, nwata ahụ ka hụrụ onwe ya n'okpuru ndo nke ndị egwuregwu bọọlụ kachasị elu nke PSG.
Bouba mere ihe niile o nwere ike ime mana ọ ka nọ n ’ndò nke ndị ọkpọ egwuregwu kacha elu nke PSG. Ebe E Si Nweta: footmercato Na Twitter
Entrancebata na ndi otu otu ndi otu PSG putara i outomi ihe ndi ozo Julian Draxler, Javier Pastore, Marco Verratti na Adrien Rabiot ndị niile nọ na elu nke ike ha. Na-etolite inpatient ọzọ na-ahapụghị nhọrọ ọ bụla, Boubakary Soumare na-awụ akpata oyi n'ahụ arịrịọ arịrịọ iji banye na nkwekọrịta ọkachamara na PSG. Nke a nyere ọtụtụ ndị klọb ohere ịnweta ya ma na-arịọ maka mbinye aka ya.
Boubakary Soumare Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị A Na-echetaghị banyere Biography - Na-ewu ewu Akụkọ
N'ime klọb niile, ọ bụ Lille OSC ji ohere ahụ kele ndị ndụmọdụ egwuregwu bọọlụ Luis Campo. Campo nwetara aka ya na talent a na-achọsi ike n'oge ọkọchị nke afọ 2017. Na mbido, ihe agaghị dịka a tụrụ anya ya maka Boubakary Soumare ka ọ na-enwe nkụda mmụọ ịhụ onye nchịkwa Christophe Galtier wụnye usoro 4-2-3-1 nke na-ahapụ naanị ebe abụọ na etiti egwuregwu. Inwe naanị oghere egwuregwu etiti abụọ kpọrọ maka nnukwu asọmpi n'etiti ndị na-eme egwuregwu etiti. Bouba rụzuru ọrụ ahụ.
Ọ bụ ezie na nsogbu dị n'etiti etiti ubi ahụ nọgidere na-aga n'ihu, ezinụlọ Boubakary Soumare dụrụ ya ọdụ ka ọ nwee ndidi banyere mmepe ahụ na ịghara ịghagharị n'iji ohere ndị na-aga. Dị ka a tụrụ anya ya, Bouba nwere nkụda mmụọ mgbe ohere wepụtara onwe ya. Ọ weta ọtụtụ mmetụta n'ọhịa karịa ibe ya na ibe ya Thiago Maia, onye buru ya ụzọ ụzọ na ngalaba nke nnọchi ọkpọchi.
Mana kama isiala, onye ọkpọ ahụ gara site na ike gaa n'ike, na-enweta oke meteoric n'ọdịdị ya dị n'etiti ndị agha. Ruo taa, otu n'ime njiri mara Bouba bụ ụzọ ọ ga-esi gafere, nke na-enye ya ohere ịkọwa egwuregwu ahụ, na-edebe ihe na-agba bọọlụ wee gbanwee egwuregwu iji melite ọgụ. Styledị Boubakary Soumare na-echetara mmadụ niile Paul Pogba [Lee n'okpuru ma kpee onwe gị ikpe].
Bouba mgbe ọ dị afọ 20 nwere ike ime ihe ọ bụla na Midfield. Ebe E Si Nweta: Imago
Dịka obi ụtọ na bọl n'ụkwụ ya, Bouba nwere ike iburu ụzọ ma ọ bụ dribble gaa n'ihu na anụ ahụ ya aghụghọ na ngwa ngwa - na-eme ka ndị iro ya na-alụ ọgụ ịchụpụ ya. Ọ bụrụgodi na ha mere, ha agaghị emeli ya. Àgwà a mere ka aha otutu ya “New Pogba”N'ihi na Bouba yiri mpempe akwụkwọ ịgba bọọlụ France onye nyeere mba ya aka ka ha merie asọmpi iko mba ụwa FIFA 2018.
Obi abụọ adịghị ya, ndị na-agba bọl bọọlụ nọ n'ọnụ ọnụ nke ịhụ ọbụna ụdị nke ka mma Paul Pogba na-agbasapụ n'ụzọ ya n'ime onyinye ụwa nke ụwa n'ihu anyị anya. Boubakary Soumare bụ n'ezie otu n'ime ihe kachasị mma n'etiti usoro mmepụta nke ndị na-eme egwuregwu n'etiti ndị ọgbọ ya nke ọgbọ France. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Boubakary Soumare Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị A Na-echetaghị banyere Biography - Ndụ mmekọrịta
Site na mmụba ya na ịbụ onye a ma ama na ịkọ akụkọ dị ka a hụrụ European Football Transfer Asịrị (n'oge edere), o doro anya na ndị egwuregwu ga-amalite ịtụgharịrị uche n'ajụjụ ndị a; Ònye bụ Boubakary Soumare?... O nwere enyi nwanyi?. EE !! Enweghị agọnarị eziokwu ahụ na ọmarịcha anya nwata ya na anya ya na meteoric ya agaghị eme ka ọ bụrụ A-lister nye ndi enyi nwanyi nwere ike ima ihe.
Isnye bụ Nwa nwanyị Nwanyị Boubakary Soumare? - Ọtụtụ ndị egwu ajụọla. Ebe E Si Nweta Foto: Picuki na ScoutNationHD
Mgbe anyị nọrọla ọtụtụ awa na ntanetị maka ihe ngosi, anyị abịala na nkwubi okwu na Boubakary Soumare n'oge edere ka ọ gbara mbọ ike ịhapụ ịkọwa onye ọ bụ nwanyị ma ọ bụ nwunye ya nwere ike ịbụ.
N'aka nke ọzọ, o nwere ike ịbụ na Bouba alụbeghị di (n'oge ederede), nkwupụta na-egosi na enweghị ịdị adị nke a WAG. B youR how na ị ga-agbaghara mgbaghara bọọlụ mgbe ọ na-ejighị ya nke ọma n'ihe gbasara mmekọrịta. Nke a nwere ike ịbụ ihe kpatara ya bụ na Bouba nwere ike enweghị enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye n'oge edere akwụkwọ.
Boubakary Soumare Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị A Na-echetaghị banyere Biography - Ndụ nke Onye
Ugbu a bụ oge iji zaa ajụjụ a na-ajụ n'ezie. Ọnye na-bụ Boubakary Soumare?… Tomara Boubakary Soumare Personal Life n'ọdụ ụgbọ elu ga-enyere gị aka ịmatakwu ụdị onye ọ bụ.
Ọnye na-bụ Boubakary Soumare? - Eziokwu ndụ nke Ya ga - enyere gị aka ịmatakwu onye ọ bụ nke ọma. Ebe E Si Nweta: D-Express & Picuki
N'ibido, Boubakary Soumare bụ onye na-ekwu okwu obere ihe, ị ga - akparị ya ma ọ bụ mee ihe ọzọ na - atọ ọchị iji mee ka ọ na - amụmụ ọnụ ọchị. Ọzọkwa, ọ dịghị atụ egwu ihe ọ bụla ma mara ihe ọ chọrọ kemgbe ọ bụ nwata. Mgbe ị na-agwa Bouba okwu, ị ga-agarịrị ebe ahụ. Ọ bụ onye kpebisiri ike ma chọọ ịga elu dịka o kwere mee.
Ihe ọzọ ederede na ndụ onwe Boubakary Soumare bụ omume ya nke ịjụ arịrịọ niile maka ajụjụ ọnụ (dịka La Voix du Nord). N'oge a na-ede akwụkwọ, ọ na-enwe mmasị ịhụ igwe mgbasa ozi gbara ya gburugburu. Dabere na FranceFootball, Bouba ekwenyeghi na ọ dị mkpa ịnweta netwọbụ mgbasa ozi mmekọrịta maka onwe ya. Ezinaụlọ Boubakary Soumare, ezigbo ndị enyi ya na klọb na-akwanyere ọchịchọ ya maka ọgụgụ isi mgbasa ozi echiche. Maka ndi enyi, ya na ndi otu ibe ya na ndi ozo kuru egwuru-egwu Nicolas Pepe. Ha abuo dika ezi-na-ulo, umu nwoke.
Nke ato na ndu nke Boubakary Soumare, dika i ghaghi isi, lebara anya, mmadu nile chikotara ya na okwu ato- (ezinụlọ, ndị enyi, ma ọ bụ bọl). Enweghị ndụ mmekọrịta n'oge edere. Ọ bụrụ na ihe adịghị atọ ya ụtọ, ọ na-adịrị ya mfe ma ọ chọghị igosipụta iwe ya n'ọhịa. Ọsọsọpke ndidiọn̄ọ ini emi esịt ayatde enye. Dabere na FranceFootball, o were iwe mgbe ọ na-egwuri egwu dịka onye agbachitere etiti mgbe ọ nọ na PSG.
Boubakary Soumare Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị A Na-echetaghị banyere Biography - Ndụ Ezinụlọ
Na ngalaba a, anyị na-ewetara gị ozi ndị ọzọ gbasara ndị ezinụlọ Boubakary Soumare malite na ndị mụrụ ya.
Offmalite, Bouba nke anyị sitere na ezinaụlọ hụrụ n'anya na-akwanyere ùgwù na nke kachasị mkpa, anaghị achọ ka a mata gị. Ndị nne na nna Boubakary Soumare nyere ya agụmakwụkwọ dị mkpa nke nyere aka mee ka àgwà ya nwee ihe ịga nke ọma. Ha emeela ka ọ nwee mmasị n'akụkụ agbata obi ya ebe o toro. N'oge a, nne ya na nna ya agbaala mbọ niile ka ha ghara ịgbasa ozi mgbasa ozi.
Ọzọkwa n'oge a na-ede akwụkwọ, Bouba echebewo ụmụnne ya, ụmụnne nwanyị, nwanne nna ya na nwanne mama ya ka ha ghara iji ya kpughee mgbasa ozi French na Bekee. O nwere ike bụrụ na ndị ezin’ụlọ niile bie ezigbo ndụ na France, otu ụbọchị, ha na ndị mgbasa ozi French ma ọ bụ nke Britain nwee nnọkọ kwesịrị ekwesị. Ihe a na-elebara onye ọ bụla anya ugbu a bụ ịhụ na Bouba nọgidere na-ebili na football.
Boubakary Soumare Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị A Na-echetaghị banyere Biography - si ebi ndụ
Onye na-agba ụkwụ nke oge a na-ebi ụdị ndụ pụrụ iche, onye na-ahụkarị mfe nke ụgbọ ala ndị mara mma, nnukwu ụlọ (ụlọ) na uwe dị oke ọnụ. Otú ọ dị, nke a abụghị okwu Bouba dị ka ọ dị, dị ka ọtụtụ ndị maara ya si dị, a na-ewere ya dị ka ihe mgbochi nye ụzọ ndụ dị egwu.
Bouba na-ebi ụdị ndụ ọ ga-ebi, onye na-enweghị mmefu ego na-enweghị isi, ọ na-ejide ya na mkpa bara uru nke anaghị efu nnukwu ego. Onweghi ihe di ka ya n’acho ugbo ala ma obu gosi na ya onwe ya na ekpori ndu n’ime nnukwu ulo (mansion). Foto dị n'okpuru chịkọtara ụdị ndụ Boubakary Soumare. Eziokwu bụ, ọ na-ahọrọ ịnara ụgbọ ala ọha n'agbanyeghị na enwere nnukwu ego iji zụta ụgbọ ala. Naanị ihe anyị hụrụ ka ọ na-agba bụ ịnyịnya ígwè.
Boubakary Soumare Ndụ gosipụtara na ọ maara ihe dị iche n'etiti ịdị mma na ihe ụtọ. Ebe E Si Nweta: Picuki & Imago
Boubakary Soumare Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị A Na-echetaghị banyere Biography - Eziokwu efu
aha otutu: Ikekwe, ị chọpụtala na anyị ejiri ya otutu aha were ya na “BoubaỌtụtụ mgbe n'isiokwu a. Ị maara?… Boubakary Soumare nwetara aha otutu yaBougba”Kwuru okwu banyere onye o nwere Paul Pogba ụdị egwuregwu.
Religion: Tọ kachasị okpukperechi na Senegal bụ Islam nke mejupụtara 92% nke ndị bi na ya. Nke a na-egosi ikpe banyere okpukpe ezinụlọ Boubakary Soumare nke bụ Islam. Anyị ga-emelitere gị ozigbo enwere ihe ngosipụta nke foto na-egosi omume okpukpe Alakụba ya.
Ogbugbu: Ogbugbu egbugbu bu ihe ama ama n’ụwa egwuregwu taa. Ndị na-agba ụkwụ na-ejikarị ya akọwa okpukpe mmadụ ma ọ bụ ndị ha hụrụ n'anya. Bouba n'oge a na-ede ihe na-enweghị igbu egbugbu na enweghi aru ya na elu ya na nke ala. Foto nke ndụ ya na-ekwu ihe niile.
Ikekwe FIFA: Soumare nwere ikike nke ịbụ otu n'ime ndị egwuregwu bọọlụ French kachasị mma na FIFA 20. Onye na-ejide bọlbụ ahụ nwere ikike ikike nke 87 na-eme ka ọ bụrụ onye zụrụ azụ maka ndị hụrụ FIFA n'anya ọrụ.
Akọwaara Boubakary Soumare FIFA. Ebe E Si Nweta: FutHead na SoFIFA
Obi abụọ adịghị ya, ọ ga-abụ ihe obi ụtọ iji Boubakary Soumare na ọnọdụ ọrụ FIFA. Chegodi ịzụta ya na 2020 wee hụ ka ọ na-ebili ọbụna karịa ike 87 ya na afọ 2025.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ Boubakary Soumare Child Plus Eziokwu Untold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agba mbọ maka izi ezi na izi ezi. Ọ bụrụ n’ịchọta ihe adịghị mma, biko kesaa ya nye anyị site na ịza ajụjụ n’okpuru. Anyị ga-eji echiche gị niile kwanyere ma kwanyere ùgwù ùgwù.
Nwere ike 25, 2018